Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1308
Boxe – J.O 2016 : hiatrika fisokajiana any Cameroun i Madagasikara
Mazava. Tsy maintsy miatrika fifaninanana fisokajiana Olympika isika raha te hanana solontena amin’ny Lalao Olympika 2016 (J.O) any Rio, Brezila, eo amin’ny taranja ady totohondry. Araka izany, ny Afrique Boxing Competition na AFBC atsy Cameroun, ny volana marsa izao, no fisokajiana Olympika afrikanina. Noho izany, nambaran’ny filohan’ny federasiona malagasin’ny ady totohondry (FMBO), Rabarisoa Hery Mamy, […]
CICR : fonja 26 eto Madagasikara nokarakaina
Par Taratra sur 25/02/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nandritra ny taona 2015, nitsidika ny fonja 26 manerana ny Nosy ny vaomiera iraisam-pirenen’ny Croix-Rouge (CICR). 17.000 ireo voafonja voatsidika tamin’izany toerana izany ka nahafantarana ireo karazana olana eny anivon’ny fonja. Nasiana fanaraha-maso manokana ihany koa ireo fonja roa tany amin’ny Nosy Kaomaoro. Maherin’ny 9.000 ireo voafonja afaka nisitraka ny fahadiovan’ny fonja sy ny fiarahamonina […]
Basikety : hanatrika ny fivoriamben’ny Fiba Afrique Ramaroson J.M
Par Taratra sur 25/02/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Hanatanteraka fivoriambe ny federasiona iraisam-pirenena eo amin’ny basikety aty Afrika na Fiba Afrique. Raha ny vaovao voaray, hotontosaina any Le Caire, Egypte, ity fivoriamben’ny birao foiben’ny Fiba Afrique ity, ny 24 sy 25 marsa izao. Manana solontena amin’io i Madagasikara amin’ny alalan-dRamaroson Jean-Michel, filohan’ny federasiona malagasin’ny basikety (FMBB) sady tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny kaomision’ny federasiona […]
Kitra – «Amboaran’ny Caf 2016» : mpilalao 20 ny mandrafitra ny Harare City FC
Tonga, omaly eto Madagasikara, ny ekipan’ny Harare City FC, avy any Zimbaboe, hifandona amin’ny AS Adema, eo amin’ny lalao miverina amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Caf. Misy olona 43 mandrafitra ny delegasiona ka ny 20 amin’ireo, mpilalao avokoa. Nolazain’izy ireo, teny am-pahatongavana teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, fa vonona izy ireo ary haka fandresena ny handehanany eto […]
Bassistes Gasy : hampivondrona ireo mpitendry gitara beso ny fikambanana
Par Taratra sur 25/02/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Tetikasa efa elaela ny fampivondronana ireo mpitendry gitara beso eto Madagasikara. Nisy ny fifanentanana teo amin’ireo samy mpitendry gitara beso, matihanina na vao misondrotra. Teraka tamin’izany fa hatao ho fikambanana ara-dalàna izy ity, ho fifanohanan’ireo samy mpitendry. “Hiantsoana indrindra an’ireo tsy matihanina, vao misondrotra sy mankafy ny gitara beso izy ity. Tetikasa hifanampiana no tena […]
Eto Antananarivo : potika avokoa ny lalana, tsy misy mijery
Ravarava avokoa ny lalana eto Antananarivo. Na tsy dia nisy aza ny orana, potika ihany ny lalana. Midika izany fa tsy mateza mihitsy ny fotodrafitrasa nataon’ireo orinasa mpanamboatra lalana. Anisan’ny tena hotohoto tanteraka ny eny 67 ha. Eo koa ny eny Ankazomanga, Antanimena… Tena ahitana fahasimbana be ireo toerana tsy dia andehanan’ny manam-pahefana matetika. Tsy […]
Fizahantany : 14%-n’ny ankizivavy iharan’ny herisetra ara-nofo
200 amin’izao fotoana izao ny mpikarakara trano fandraisam-bahiny sy mpiasa amin’ny sehatra tsy miankina, naneho fahavononana hiady amin’ny fizahantany mamoafady miantefa amin’ny ankizy eto amintsika. Napetraka ny fitsipika amin’ny fitondran-tena ho an’ny mpiantsehatra rehetra amin’ny fizahantany ny volana mey 2015 iadiana amin’ny fanararaotana ara-nofo atao amin’ny ankizy. 14%-n’ny ankizivavy 15 -19 taona niharan’ny herisetra ara-nofo […]
ComNat/Unesco – Foibe Betania – Vohitsera : manako amin’ny fanabeazana ny fampiasana ny teny reny
Notontosaina tetsy amin’ny foibe Betania Ankasina ny « Katro-doha ». Adihevitra niompana tamin’ny « fanabeazana tsara kalitao, teny enti-mampianatra, vokatra andrasana amin’ny fampianarana ». Fanabeazana ny zaza malagasy, hampiasa ny teny malagasy ve sa ny teny vahiny ? Aiza na iza no hahazoana vokatra na kalitao tsara kokoa ? Saika tsy niala lavitra tamin’ny famaliana ireo fanontaniana ireo ny adihevitra niseho, […]
IFM – Teatra : hoentina an-tsehatra ny « Amboarina ny maty »
« Amboarina ny maty ». Raha adika ara-bakiteny tsotsotra, izay no lohatenin’ny piesy teatraly hoentina an-tsehatra etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely, ny zoma hariva izao. Nalain’i Emmanuel Noblet avy amin’ny boky nosoratan’i Maylis de Kerangal, mitondra ny lohateny hoe : « Réparer les vivants », ity tantara an-tsehatra ity. Hilalao izany i Emmanuel Noblet. Manohina fo, […]
Par Taratra sur 25/02/2016 En Bref, NS Malagasy
Tafiditra ao anatin’ny distrika nahazo filazana mavo manambara loza mitatao Antananarivo, omaly, araka ny fanambaran’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Manampy azy Atsinanana, Mangoro, Anjozorobe, Andramasina, Itasy ary ny ilany andrefan’i Vakinankaratra. Nahazo filazana mena, loza mihatra kosa ny faritra Vatovavy Fitovinany, Mahanoro, Anosibe an’ala, Moramanga, Ambatolampy, Antanifotsy, Fandriana, Ambositra sy Manandrina. Tokony ho […]
FFM vaovao : tsy manapaka momba ny famotsoran-keloka ny fitsarana
Par Taratra sur 25/02/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Hisy ihany indray ny fampihavanam-pirenena. Hiova ny FFM: tsy manapaka momba ny famotsoran-keloka ny fitsarana… “Amin’ny fampihavanam-pirenena ihany ny fanoloram-pahefana ny FFM hanome famotsoran-keloka, fa tsy notezaina amin’ny toe-drarahara politika hanomezana famotsoran-keloka ho amin’ny fampihavanam-pirenena ny mpitsara.” Fanazavan’ny eo anivon’ny komitin’ny manampahaizana, notarihin’ny Pr Rasolo André, nandrafitra ny alohan’ny volavolan-dalàna fananganana Filankevitry ny fampihavanana malagasy […]
Filoha Rajaonarimampianina : « Itokisan’ny mpamatsy vola isika »
Mbola nanamafy indray. « Namatsy vola izao fotodrafitrasa sy fitaovana izao ny Banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana (Bad). Midika izany fa itokisan’ny mpamatsy vola isika », hoy ny filoha Rajaonarimampianina, omaly, tany Miandrivazo. Notokanana tamin’izany ny fahavitan’ny hopitaly fandidiana any an-toerana, ahitana efitra 10 miaraka amin’ny fiara mpitondra marary. Nanteriny fa tsy niandry ela taorian’ny nandalovany tany […]
Nitondra valin-kafatra ny minisitra Mahafaly
Namaly ireo parlemantera zanak’i Sofia ny minisitry ny Atitany sady mpiahy iny faritra iny, Mahafaly Solonandrasana, afakomaly. Nambarany fa tsy manana fifandraisana amin’ny orinasa sinoa ambara fa nividy ny tany any an-toerana ny tenany. « Tsy tompon’andraikitra amin’ny resaka fananan-tany aho ary tsy mahalala izany », hoy izy. Nohitsiny fa tokony hitondra ny raharaha eny amin’ny fitsarana […]
Ranesa Firiana : “Miankina amin’ny fitantanana sy ny asa vita ny fahamarinan-toerana”
Mby aiza ny fahamarinan-toerana politika? Maneho ny fijeriny ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana: “Tsy miankina velively amin’ny rafitra ny fahamarinan-toerana politika, fa ny fankasitrahan’ny vahoaka sy ny maro anisa ny fomba enti-mitantana sy ny asa vita ary ny vina hotanterahina.” Dinidinika… Gazety Taratra (*): Marina ve ny hoe tsy ara-dalàna ny fomba nifidianana ireo […]
Fanomanana ny Frankofonia : manam-pahaizana kanadianina mandrafitra ny fiarovana
Nanapa-kevitra ny fanjakana kanadianina, nandefa manam-pahaizana manokana avy any aminy hanampy amin’ny fikarakarana ny fanomanana ny fivoriamben’ny frankofonia faha-16 hatao eto Madagasikara. « Tonga izy ireo hizara ny taikefany amin’ny komisiona eto an-toerana momba ny paikady rehetra tokony hapetraka hanamafisana izay efa natomboka mba hahatontosa soa aman-tsara ny fivoriambe. Fitsidihana faharoa izao taorian’ny volana janoary, izay […]
Antenimierandoholona : banga ny toeran’ny mpanohitra etsy Anosikely
Tahaka ny eny Tsimbazaza ihany. Tsy nirotsaka sady tsy nanolotra kandidà ho mpitarika ny mpanohitra ao amin’ny Antenimierandoholona ny Tim sy ny Mapar. Manana seza iray fahafito eny Anosikely izy ireo, saingy tsy niditra. “Iarahan’ny mpanohitra rehetra ny mandany izany. Hatao latsabato ny fifidianana ny ho mpitarika ny mpanohitra anefa raha tsy mifanaraka izy ireo”, […]
Zaka tsara : tsy mety milamina…
Aiza ihany ity hoe fahamarinan-toerana sy fitoniana politika? Tsy hita be ihany. Tabataba lalandava izao. Ny olom-bitsy manodidina ireo mpitondra ambony no manakorontana? Tsy fantatra intsony. Ny hazo, hono, tapaka, miandany amin’ny vy ny sampany. Lasa resabe izao ny amin’ny hoe tokony hanao fametraham-pialana faobe ny governemanta. Mitatao be ihany saika isan’andro vaky ny amin’izany… […]
Toliara : mpamongady notafihin’ny jiolahy, voaroba ny 6 tapitrisa Ar
Raim-pianakaviana iray voatsatoka antsy teo amin’ny tanany nandritra ny fanafihan-jiolahy nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika tao Toliara, ny talata hariva teo. Firavaka volamena niampy vola 6 tapitrisa Ar lasan’ireo jiolahy… Mpivaro-bary ambongadiny iray no notafihin’ny jiolahy mitam-piadiana ny talata hariva teo tamin’ny 6 ora sy 30 mn tao Toliara. Jiolahy dimy mirongo basy P.A sy […]
Manohy ny fikarakarana ny lisi-pifidianana sy fanomanana ireo fifidianana mbola hatao ny Ceni, araka ny nambaran’ny filoha lefitra, Rakotonarivo Thierry, omaly. « Eo koa ny fanamboarana ny rafitry ny Ceni ka hampidirana mpiasa vaovao miisa fito. Ho tale sy sekretera mpanatanteraka izy ireo », hoy izy. Manampy izany ny fandefasan’ny Ceni iraka manara-maso ny fifidianana any amin’ireo […]
Mitohy ny krizy : tafidina ambany indrindra ny vidin’ny nikela
Tsy mety tafarina ny vidin’ny nikela eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Nahatratra 7.720 dolara ny vidin’ny iray taonina ny 12 febroary teo. Mitohy ny krizy! Mitotongana hatrany ny vidin’ny akora amin’ny harena an-kibon’ny tany ankehitriny. Ny 12 febroary teo, tafidina 7.720 dolara ny vidin’ny iray taonina, vidiny ambany indrindra hatramin’izay. Raha atao ny fampitahana tato anatin’ny […]
DRDA Vakinankaratra – JICA : ampiharina ny voly vary Papriz
Par Taratra sur 25/02/2016 Economie, NS Malagasy
Miditra amin’ny dingana faharoa nanomboka ny taona 2015 ny tetikasa Papriz, fampiroboroboana ny fambolem-bary any amin’ny faritra Vakinankaratra. Manohana sy mizara fahaiza-manao ny amin’izany ny DRDA Vakinankaratra miaraka amin’ny Agence japonaise de coopération internationale (Jica). Tany am-boalohany, tsy nisy afa-tsy mpamboly efatra monja ny nampihatra azy. Ankehitriny, fitaratra amin’io tetikasa io ny ao amin’ny lemaka […]
Ambatolahy Sahanivotry : roa taona nivoarana izao ny fikambanana Manaovasoa
Mila mandray ny andraikiny sy miray hina ny tantsaha fa mahavita zavatra. Manana ny traikefany amin’izany ny fikambanana Manaovasoa any Ambatolahy Sahanivotry, faritra Vakinankaratra, iraisan’ny mpamboly sy mpiompy ary ahitana mpikambana 39. Hatramin’ny roa taona nijoroany, mandrotsaka 1.000 Ar isan-kerinandro ao anatin’ny kitapom-bolan’ny fikambanana ny mpikambana isanisany. Miainga avy amin’izany ny hifanampian’izy ireo. Raha misy […]
Zandary : nanao fanazarantena ireo manamboninahitra
Nanatanteraka fanazaran-tena teny amin’ny ivontoeram-piofanan’ny zandarin’ny Gsis Ivato, afakomaly ireo manamboninahitra miasa eo anivon’ny fibaikoan’ny zandarimariam-pirenena, notarihin’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Rakoto François Rodin. Araka ny fanazavan’ny manambonahitra iray, efa fanao mahazatra ny fanazarantena toy izao raha ho an’ireo manambonahitra mitana ny fibaikoana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Tsy maintsy manome ohatra amin’ireo zandary eo ambany fifehezana […]
Raharaha kidnapping : mandeha ny famotorana an’i Stéphanie
Nanomboka omaly ihany ny famotorana an’i Roger Lala Stéphanie, anisan’ny voarohirohy amin’ny raharaha kidnapping eto amintsika, indrindra tamin’ny fakana an-keriny an’i Annie sy Arnaud tany Toamasina. Ny 22 janoary teo no namoahana ny didy fampikarohana azy ity rehefa nivoaka tao amin’ny famotorana ireo voasambotra tany Toamasina ny anarany. Efa voatonontonona tamin’ny asa ratsy matetika izy […]
Niatrika ny fitsarana, omaly tany Antsirabe, ireo olona 16 voarohirohy amin’ny fandoroana ny biraon’ny kaominina Inanantonana. Olona valo izy ireo no voarohirohy tamin’izany, niampy ny ben’ny Tanàna teo aloha sy pasiteran’ny FLM iray, ary olona enina hafa ihany koa. Araka ny vaovao avy any an-toerana, nahazo fahafahana vonjimaika avokoa ireo rehefa avy niatrika ny mpitsara […]
« Précédent 1 … 1 306 1 307 1 308 1 309 1 310 … 1 358 Suivant »